Nyochaa nke ebube Parrot Zik 2.0 | Akụkọ akụrụngwa
Nyochaa nke ebube Parrot Zik 2.0
Juan Colilla | | Ngwa, Ndị na-ekwu okwu, Ngwa, General, Ngwa agha, Nyocha
Enwere m olileanya na ị ga-echeta igbe na-adịbeghị anya nke okpu agha ndị a magburu onwe ya, ọ bụrụ na ọ bụghị, ebe ọ bụ na anyị agaghị abanye nkọwa, ana m akwado ka ị gafee ya unboxing nke icheku Zik 2.0 ma emesia ị laghachi ebe a.
Maka ndị gị na-echeta ha ma ọ bụ ndị hụrụ ya, ị ga-amata na anyị nwere ọtụtụ atụmanya tinye na okpu agha ndị a, ewepụtara m oge m iji nye ha ezigbo kpụ ọkụ n'ọnụ ebe ọ bụ na ọ bụghị ngwaahịa m chọrọ inyocha gwuo egwu, ma taa m wetara gị ozi ọma, icheoku Zik 2.0 bụ sọsọ.
Anọ m na-anwa ha ihe dị ka izu abụọ ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ izu atọ ma enweghị m ike ịta ụta ọ bụla na ha, m gbalịrị, na-ahụ n'ezie na e rere ha maka € 350 echere m na 'agaghị m eme ka ọ dị mfe maka ha, dị otú ahụ dị oké ọnụ ngwaahịa kwesịrị naanị zụta ma ọ bụrụ na anyị na-n'ezie ga-enwe afọ ojuju ", na n'ihi ya, ọ dịla, nke a bụ otu n'ime ndị kasị mma ụda ahụmahụ na m nwee ike ịnụ ụtọ, ma hey, m na-aga hapụ gị nyocha vidio nke dị ogologo (enweghị m ike ịhapụ ịhapụ ụfọdụ nkọwa na-enweghị ịgụta ọnụ) ma emesịa m ga-emesiwanye ike edere:
Ndewo ọzọ 😀 Enwere m olileanya na nkeji 20 nke vidiyo emeela ka ị dị mfe dịka ha bụ maka m mgbe m na-edekọ ha, n'ikwu nke ahụ, ka anyị gaa n'ihe dị mkpa, okpu agha.
1 Uru na ọghọm
4 Kwa ụbọchị
6 Soundda ụda
Fantastic ụda àgwà.
Omimi, punchy,-edu mara mma.
Okike mara mma, siri ike ma dịkwa mma nke ukwuu.
Juputa na ngwa teknụzụ dị elu na ihe mmetụta nke ị ga - achọpụta naanị mgbe ị hụrụ otu anwansi ha ga-eji.
Ezigbo ego na-atụle ịtụle ekweisi na-adịghị eru ala akpụkpọ ụkwụ.
Ogologo batrị batrị ka ị ghara ịnwụ.
Dị ngosipụta na-enweghị atụ na ndakọrịta maka njikọ Bluetooth 3.0 na ọdụ ụgbọ mmiri 3 mm.
Nhọrọ zuru oke nke ga - enyere gị aka ịhazi ahụmịhe gị zuru oke, zuru oke maka ihe kachasị achọ
Odikwa na agba 6, mara nma ma na adikwa nma.
Enweghị isi ihe, na enweghị ike ịnwe ha na mbụ.
Mgbe m jiri ha maka ... ka anyị kwuo izu abụọ na ọkara, m na-etinye ha ka ha kwụọ ụgwọ otu oge, na enweghị oge ọ bụ n'ihi na ha anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ na batrị agwụla, mana n'ihi na achọrọ m ịma ogologo oge ha were ụgwọ ma ha dị ihe dịka 30%, enweghị mgbagha na ha na-ebu ngwa ngwa na batrị ahụ na-adịte aka, m na-ekwukwa ọtụtụ ihe n'ihi na nkezi 7/8 awa nke egwu egwu na-eburu n'uche ọrụ niile ọ na-arụ, bụ ihe na-ekwu na ọ dịghị ihe ọzọ dị egwu.
Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ezigbo ọmarịcha mma, enwere m mmasị n'ịdị mfe nke imewe na ike siri ike ọ na-eweta n'otu oge ahụ, nchikota kwesịrị ịnwe mmasị na nhọrọ nke ihe na-aga nke ọma, ịghara ịkọwa nke ahụ n'okpuru ọmarịcha ihu ọma ahụ. odịbe ezi anụ ọhịa teknụzụ, igwe okwu asatọ, mgbagha jijiji na ihe mmetụta ngagharị, igwe okwu abụọ dị elu na batrị ejizi nke ọma n'okpuru mkpuchi magnet ọma.
Anyị nwere ike ịhọrọ nhọta nke agba isii, ọ dabere na uto.
N'okwu m ihe eji eme ya bụ: Aga m ahapụ ụlọ, m na-akpọrọ ha, gbanye ha ma tinye ha n'olu m mgbe m na-ahapụ ụlọ, ozugbo m malitere ịgbada m na-etinye ha nke ọma n'isi m ma naanị m metụta aka ntị ntị aka nri na mkpịsị aka m Dị ka a ga-asị na iji anwansi egwu na ekwentị m na-egwu ugbu a, na enwebeghị m iwepụ ya n'akpa m, ọ bụrụ na egwu ahụ masịrị m, m ga-ahapụrụ ya ma dozie olu ya site na ịpịgharị mkpịsị aka m. karịrị otu ntị ahụ, ma ọ bụghị na otu ụdị ahụ ma enwere ntụgharị dị iche, m na-agafe n'ọbá akwụkwọ egwu m. Ka ọ na-erule oge m hapụrụ ebe ahụ, ana m ege egwu m kachasị amasị m na-amụmụ ọnụ ọchị na ihu na-enweghị anụ na-emechi ọnụ ụzọ m, ndị mmadụ na-ekwu okwu ma ọ bụ na-akpasu iwe ọ bụla, enwebeghị m mmasị ige egwu.
Oge ahụ eruo mgbe ị zutere mmadụ ma ọ bụ banye n'ụlọ ahịa, ịdị mfe anaghị ahapụ gị, naanị ị ga-agbada okpu agha gị n'olu ka egwu wee kwụsị ozugbo na ozugbo, ozugbo ị kwuchara / nụrụ ihe ị kwesịrị, gị debe ha n'isi gị ma egwu na-aga n'ihu, ihe niile na-achịkwa ya na ndagwurugwu Zik 2.0, Pụ n'èzí bụ ihe obi ụtọ na okpu agha ndị a.
Ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla ha kpọrọ gị, chefuo iwepụ ekwentị gị n’akpa gị, Parrot Zik 2.0 ga-agụpụta n’olu dara ụda onye na-akpọ gị, emesịa anyị nwere ike ịme ngosipụta dabere na anyị chọrọ ịnabata ma ọ bụ jụ oku ahụ, ọ dị mfe . Ma ọ bụrụ na anyị anakwere ya, anyị ga-enwe mkparịta ụka fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke ebumpụta ụwa, naanị ihe dị iche bụ na ị gaghị ahụ onye nke ọzọ n'ihu gị.
Ọ bụrụ na ha na-ekwu na ọ dịghị ihe na ọ dịghị onye zuru oke, ikekwe Parrot Zik 2.0 bụ ihe akaebe na nke a abụghị eziokwu, anyị nwere ike iche na okpu okpu nke caliber a ka edobere maka ngwaọrụ ọgbọ ikpeazụ nke anyị ga-akwụ ụgwọ okpukpu abụọ nke ngwaahịa a. , ọ dịghị ihe ọzọ, Parrot Zik 2.0 bụ ihe mkpuchi niile nke okpu agha.
Kedu ihe anyị nwere nke ama / PC dị ugbu a dị mma? Anyị na-enwe obi ụtọ na njikọ Bluetooth Bluetooth ya 3.0 iji kpọọ egwu kpamkpam na-enweghị eriri yana karịa oke zuru oke maka ya (Enwetụbeghị m nsogbu dị mma maka ịhapụ ngwaọrụ ahụ, ma ọ bụ ịnọ n'ime ụlọ ọzọ). Ọ bụrụ na ọ bụ ekwentị dị mma karịa ebe anyị nwere ike iji ngwa gọọmentị hazie akụkụ anyị chọrọ.
Na anyị enweghị moderately PC / PC dị ugbu a? Enweghị nsogbu, anyị na-ewepụta 3mm jack cable na, ọ bụ ezie na anyị na-ahụ ngagharị anyị metụtara, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ngwaahịa a dị egwu na-enweghị atụ egwu.
N'ebe a, agaghị m akọwa ọtụtụ, ọ dị mfe ịkọwa ya, ụda ahụ dị obi ọjọọ, ụda dị mma bụ ihe magburu onwe ya, bass bụ ihe kachasị mma m nụrụ na ndụ m niile site na ekweisi, iche iche dị oke, ma n'ihi ekweisi n'onwe ha na nkenke mkpọtụ na-arụ ọrụ nke na-egbochi imetọ ahụmịhe egwu anyị. Na ịghara ịkọwapụta na ọ bụrụ na anyị bụ ndị onwe anyị, anyị nwere ike iji nha nhazi na spatialization iji mezie ọdịyo ahụ na nke kachasị mkpa anyị.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ iwere ha, anyị ga-ewere ngwaahịa ahụ n'onwe ya, eriri igwe, ngwaọrụ efu, anyị na-etinye ndị ohi ma gawa ụzọ anyị, ọ bụrụ na batrị gị apụ na okpu agha a maka ihe kpatara ya, ha na-eji njikọta ikwu ihe a na-akpọ OTG, ihe njikọ MicroUSB a na-ahụkarị nke dị n'etiti Android smartphones taa, gam akporo smartphones na ọtụtụ ngwaahịa ndị ọzọ, yabụ ịnye ha ebe ọ bụla agaghị abụ nsogbu.
Icheku Zik 2.0
Hụ na ụlọ ahịa gọọmentị
Ọ bụrụ n’ịchọ okpu agha, ikele gị, ị chọtala ha. Ọ bụrụ na ị naghị achọ okpu agha, chee echiche banyere ya, ọ bụ ngwaahịa na ọ bụ ezie na ọ dị ka nzuzu ga-agbanwe obere nkọwa nke ndụ gị kwa ụbọchị, na-enweghị obi abụọ maka mma. Nke kachasị mma, ọ bụ ngwaahịa amamiihe mara mma, oku na-arụ ọrụ dị ka amara, egwu bụ ihe ekpughere ekpughere, yana atụmatụ enweghị ntụpọ, Ana m akwado ha 100%, A na m enye ha kpakpando 5 n Iihi na enweghị m ike inye ha 10.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Nyochaa nke ebube Parrot Zik 2.0
Ọ bụ ụgha na ha enweghị ma ọ bụrụ na ha nwere obere ma ọ bụ ọghọm
1. Ka ọnwa na-aga, a na-ekpuchighị nkewa n'etiti pad na akwa dị n'ime (na m na-ekwu ya n'ụzọ ahụ n'ozuzu n'ihi na ọ meela ụdị ndị ọrụ a na m na-ekpe ekpere ugbu a na ọ gaghị eme m)
2. O nwekwara ike ime na ọ bụ ihe na-egosi mkpụmkpụ dị n'otu akụkụ, nke na-akpata ụda na nnyonye anya, nke a emeela m mgbe ọ hapụrụ ma ọ laghachite, ahapụwo m ya ka ọ hapụ ya na enweghị batrị n'abalị ọ bụrụ na okwu a emee echi.
3- Ọ bụrụ na ị tụọ 1,80 ma ọ bụ karịa, eleghị anya ị ga-enwekwu okpokoro isi na ha dị ka m na akara ikpeazụ nke akwa isi n'isi ma ka dị
Atọ iji lelee faịlụ na folda na draịvụ na ihe nchọgharị Internetntanetị
Etu esi achọpụta ọdịda na Kaadị vidiyo anyị na Windows ma ọ bụ na-enweghị Windows